Global Voices teny Malagasy » Iran: Nosoloina Sarim-bavahadin’ny Anjerimanontolo Ny Mariky Ny Nokleary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Marsa 2015 2:34 GMT 1	 · Mpanoratra Mahsa Alimardani Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Mediam-bahoaka, Politika
Ny 2 Martsa lasa teo no navoaky ny  Banky Foibe ao Iran ilay vola taratasy vaovao 50.000 Rial, izay noraisin'ny mpanara-baovao maro ho “fihetsika politika”. Ilay vola vaovao, izay naseho ho fantatr'ireo mpikambana ao amin'ny Anjerimanontolon'i Teheran tamin'ny 4 Martsa, dia manolo ireo sary famantarana ny nokleary ho ny vavahadin'ny Anjerimanontolon'i Teheran.
Amin'izao fotoana izao, dia ao anatin'ny fifampiraharahàna  miaraka amin'ny P5+1 any Lausanne, Soisa, momba ny fandaharanasa nokleariny ny governemanta Iraniana. Ny faran'ny Martsa no napetraka ho fetra farany amin'ireo fifanarahana. Ny fifanarahana iray momba ny nokleary no hamaritra ny fetran'ny fanatavezana ny nokleary ao Iran ho fanampin'ny fomba hanesorana ireo sazy mihatra amin'i Iran.
vola taratasy 500 Rial fahiny natonta taorian'ny revolisiona islamika voalohany tamin'ny 1979, nahitàna ny sarin'ny vavahadin'ny Anjerimanontolon'i Teheran. Sary tao amin'ny Wikipedia .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/03/19/68639/
 navoaky ny: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931211001581